At Inoenderana tinoshandisa yakawanda nguva tichigadzirira vamwe vanhu kutora mifananidzo padandemutande, saka heano mamwe anokurumidza anonongedzera atakatora munzira.
Kazhinji kugadzirira pikicha yewebhusaiti yako kana blog inoda kuti iwe uiite diki, kunyanya kana iri kuuya kubva kune yakawanda-megapixel digital kamera. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kudzikiswa kwehukuru kunoreva kudzikiswa mune zvakadzama, sezvo Photoshop iri mushing? pamwechete mapikiseli akavakidzana kuitira kuti akwanise mufananidzo wacho nematanho awo matsva; izvi zvinopa iwo mufananidzo kutadza kuona.
Iwo maitirwo eiyo Unsharp Mask dialog bhokisi angaratidzika anotyisa, asi nhau dzakanaka dzekugadzirira mafoto ewebhu haufanire kutyisidzira navo zvakanyanya. Ini ndinowana Mari ye50%, Radius ye .5, uye Threshold ye0 inoshanda ingangoita nguva yese.
Kuzadza kwechifananidzo ndiko kusimba kwemavara. Pamifananidzo isina kuzara, matani eganda anotaridzika uye matenga anotaridzika kuchena uye kusviba. Kuti uwedzere humwe hupenyu kumifananidzo yako, Photoshop CS4 ine firita yandinokurudzira inonzi Vibrance.
Tags: Adobe Photoshop cs4chirimwazvirimwa mifananidzofiritamufananidzomufananidzo chirimwaimage optimizationmufananidzoKupikisaPhotoshopPhotoshop cs4unsharp maskunsharp mask firitakudederavibrance rukoko
Bhiri (@billcenglish) ndiye mukuru wekugadzira pa Inoenderana uye anga achigadzira hunyanzvi pamakomputa kubva pamazuva eAmiga 500. Iyo Internet newebhu browser zvakamubvumidza kuti pakupedzisira abatanidze zvido zveupenyu hwese mukugadzira graphic uye huteedzerwe hunyanzvi nekufarira kwake tekinoroji uye zvirongwa. Zvinokuvaraidza zveBill zvinosanganisira Marvel comics, Guitar Hero, uye kutarisa podcast nezve mafirimu. Mazhinji ezvirongwa zvake zvekugadzira zvinowedzerwa neakawanda huwandu hweDhiet Coke. Parizvino anogara kuWestfield, IN, nemukadzi wake anoshamisa, Nicole, uye nemwanakomana wake anoshamisa, Van.